Patronpath dia mandefa ny fisian'ny tranonkala vaovao | Martech Zone
Patronpath dia mandefa ny fisian'ny tranonkala vaovao
Friday, May 2, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha vao nokaramaina aho tamin'ny Patronpath, Nihoron-koditra aho (eny, marina izany) tao amin'ilay tranokala niarina. Tselatra madio io, tsy misy pejy, tsy misy fanatsarana farany (na dia feno SWFObject aza), tsy misy fitaovana fanavaozana ny atiny… ary indrindra indrindra, tsy misy fifamoivoizana.
Tranga iray izay lafo be, tsy misy tambiny fampiasam-bola. Rehefa nanatona ny masoivoho namolavola ilay tranonkala aho dia tsy nisy ny fialan-tsiny. Raha ny marina, rehefa nitaraina momba ny SEO aho dia nanolotra fifanarahana lafo iray hafa hanatsarana ny tranonkala izy ireo. Io no mololo farany! Tsy misy masoivoho miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana hanangana tranokala izay tsy misy olona mahita.
Ampy ny rant! Niara-niasa tamin'ny anay i Mark Gallo Mpiara marika sy marketing ao amin'ny Kristian Andersen ary nasain'izy ireo nanamboatra tranokala ho anay, izay ampiarahina miaraka Rafitra fitantanana ny atiny Imavex. Kristian dia manana talenta tsy mampino ao amin'ny fikambanana misy azy.
Nandalo fanitsiana vitsivitsy momba ilay tranokala izahay alohan'ny nanorenany ity layout ity. Mino aho fa miresaka amin'ny maha matihanina ny orinasanay ary koa ny tanjaka izay manomboka mihombo ny marika!
Mipetraka izao ny tranokala, ary tena tsara tarehy ary tsotra be ny fitetezana azy. (Raha manontany tena ianao - eny, ny fitorahana bilaogy dia ho endri-javatra amin'ny ho avy). Ity misy pikantsary:
Faly aho fa ity dia lafiny iray azonay natolotra talohan'ny nanakarany ny talen'ny Marketing vaovao, Marty Bird! Mety ho halako ny nanolotra ilay tranokala taloha.
Tsy hahatonga anao hahita fahombiazana ny marimaritra iraisana
May 2, 2008 ao amin'ny 9: 01 PM
Iza no masoivoho izay nanakarama anao tamina tranokala izay tsy afaka nisaina tamin'ny motera fikarohana ??
May 2, 2008 ao amin'ny 10: 12 PM
Holazaiko aminao, fa tsy te hanaitra nofy ratsy ao aminao aho, Jim!
May 3, 2008 ao amin'ny 9: 49 PM
Toerana mahafinaritra Doug. Tsy andriko ny mampiseho anao tranonkala vaovao iray hafa (hint hint) afaka herinandro vitsivitsy 🙂